Gini ka Sadulu putara? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Sadulu mmewere - esi edozi
Gini ka Sadulu putara?
Nkọwa. A nkwonkwobuebe ọkpụkpụ abụọ na-ezute.Sadulunkwonkwodịụdị ọzọ nke nkwonkwo synovial. Nasadulunkwonkwo na-enweta aha ya n'ihi na ọkpụkpụ na-akpụ otu akụkụ nke nkwonkwo ahụbuconcave (tụgharịrị n'ime) na otu njedebe ma yie ka asadulu. Ọkpụkpụ nke ọzọbuconvex (tụgharịrị n'èzí), ọ dịkwa ka onye na-agba ịnyịnya na asadulu.
Njikọ nke ọkpọ na-akọwa mmegharị ahụ na njedebe ya. Ekele gị na nkuzi ọzọ na Proko. Ihe nkuzi a gbasara udị nkwonkwo n’ahụ mmadụ.
Dịka onye na-ese ihe, ọ bụ naanị mkpa ka anyị mụta nkwonkwo synovial, dịka ubu na ikpere n'ihi na ha na-agagharị. Nkwonkwo na-adị nro na cartilaginous anaghị emegharị ahụ, ụfọdụ, dị ka njikọta ọkpụkpụ ọkpụkpụ abụọ, anaghị agagharị ma ọlị. Ka ị na-amụta ise, attentionaa ntị na nkwonkwo synovial ma mee ka echiche gị pụọ na ọkpụkpụ ahụ.
Ọ bụrụ na ịmara ebe mgbatị dị na ụkwụ ahụ, ịmara na ọ ga-eme nke a ma ọ bụ na ọ gaghị eme mgbe ị guzoro n'ụkwụ gị. Ọ ga-eme nke a. Anyị kwesịrị ịmara ebe nkwonkwo mgbatị ahụ ga-eme ka Squash na Stretch dị ka nke izizi.
Nkwonkwo Synovial E nwere ụdị synovial isii. Ha nwere ụdị dị iche iche, mana ihe kachasị mkpa gbasara ha bụ mmeghari ahụ ha kwere. Mkpakọrịta ga-ekpebi ọnọdụ ndị ahụ anyị nwere ike iche.
Anyị na-amụta imepụta ha. Anyị na-amụtakwa ime ka ókèala gafee oke. Typesdị nkwonkwo synovial 6 ahụ bụ: Hinge, Pivot, Ball & Socket, Ellipsoid, Saddle and Plane.
Ka anyị site na ha otu otu. Mgbabere ahụ - Mkpokọta bụ nkwonkwo dị mfe, ọ na-enye ohere mmegharị naanị n'otu axis. Ọdịdị ya na-egbochi ntụgharị na nke a ma ọ bụ na ntụziaka ahụ.
Isi nke otu ọkpụkpụ na-ekpuchi gburugburu isi nke ọzọ, na-enye ohere ka ọ kwụsie ike. Laa azụ n'okwu okwu nke izu gara aga, njikọ nkwonkwo na-enye ohere mgbanwe ma gbatịa ya! Nke ahụ bụ niile, ma ọ na-eme ya nke ọma. Dị ka ihe nko na ọnụ ụzọ, hapụ ha ka ha mepee ma ọ bụ mechie.
Ihe atụ kachasị mma nke a bụ ikpere aka. Nke a bụ adiana ke a dị mfe ọkpụkpụ. mgbanwe na ndọtị.
Yabụ ọ bụrụ na ikpere aka na-ekwe ka mgbatị na mgbatị, olee otu o si bia na anyị nwere ike ịgbanye ihu ihu? Ọfọn, ka anyị lee esote nkwonkwo ọzọ na-esote naanị otu ahịrị; otu o sila dị, ọ na-agagharia site na ogologo axis. Ọkpụkpụ cylindrical dabara na mgbanaka nke ọkpụkpụ na akwara, dịka ọ dị na nkwonkwo Ra Dio ulnar nke dị n'okpuru ikpere. Okpu okpu nke okpukpu a na adaba na nke a.
Ligaments mezue mgbanaka ahụ, na-ejide ọkpụkpụ ya ma na-agbanwegharị okirikiri dị n'ime ya. Nsonaazụ na ihu ihu bụ ihe anyị na-akpọ pronation na supination. N'oge pronation, isi nke okirikiri na-agbagharị na na isi nke ulna.
Cubit dikwara nwayọ. Cheta, nkwonkwo mgbatị na ikpere aka na-egbochi ọnya ahụ ịpịgharị ma na-agbagọ na-eme na okirikiri. Ma site n'ụzọ, nkwonkwo distal nke ulna na okirikiri bụkwa njikọ swivel.
Nchikota nke nkpuru elu na nke ala na-emeghari mmeghari a nke imeghari na ighota Bọọlụ & soket bụ onye mmeri nke nkwonkwo niile. Mee ngwa ngwa maka bọọlụ na pan! Ọdịdị ya bụ kpọmkwem ihe ọ na-ada. Otu scoop na pan.
Ọdịdị a dị mfe ma dị irè na-enye gị ohere ịmegharị na anyụike niile - mgbanwe, ndọtị, mgbatị, ntinye, ntụgharị na nkụja mgbagharị. Isi nkwonkwo abụọ nke ahụ dị na úkwù na ubu. Hip nwere miri miri emi na-enye nkwụsi ike mana na-egbochi nnwere onwe ịgagharị.
Nkwonkwo ubu nwere oghere na-atọ ụtọ nke na-eme ka ọ dị mfe ịrụ ọrụ mana ọ na-ewepụ nkwụsi ike ụfọdụ. Ikekwe nke a bụ ihe mere eji eme ka ubu ghara ịdị na-eme ka ọdịdị oval na-agbanwe, ma ọ ka nwere ike ịtụgharị na anyụike abụọ, na-ekwe ka mgbatị / mgbatị, mgbatị / ntinye, mgbagharị. Circumduction bụ naanị nchikota nke ndị ọzọ niile na okirikiri.
Bọọlụ ma ọ bụ oval isi na-amịkwa na pan. Ka ọ na-agbagharị tinyere na mbara mbara, ị ga-ahụ ya ka o si n’apịtị pụta. N'ihi ya, ọ slides azụ n'ime n'etiti.
Ezigbo ihe atụ nke nkwonkwo ellipsoid bụ nkwojiaka nkwonkwo aka, nke a na-akpọkwa njikọ rediocarpal. Otu ìgwè nke ọkpụkpụ carpal na-agbagharị n'ime oghere nke radius. Nkwonkwo sadulu yiri nke ellipsoid, mana a na-egbochi ịtụgharị ọkachasị n'ihi nhazi nke ọkpụkpụ.
Ọdịdị nke sadulu ahụ na-adọrọ mmasị nke ukwuu. Ọkpụkpụ abụọ ahụ nwere ebe a na-emechi emechi na nke gbagọrọ agbagọ. Convex pụtara na elu ahụ na-apụta dị ka ugwu.
Concave pụtara akụkụ dị n'elu n'ime, dị ka oghere ma ọ bụ ọgba, ụgbọ elu concave nke otu kwekọrọ na convex ụgbọ elu nke ọzọ. Ọ dịka 3D yin-yang! Ma ọ bụ ehi na-agba ịnyịnya! Sadulu Thekwụ Themụ ehi na-etolite elu, na ụkwụ nke elu, nke na-agbanye gburugburu nke ala, na-ekwe ka ntụgharị. Ahụ nke elu nwere ike ịdaba n'ime ụkwụ nke ala.
Ọdịdị a pụrụ iche na-enye ohere ka nkwonkwo na-emegharị emegharị, gbatịa, gbatịpụ, kpọbata, gbagharia ma na-agbagharị n’ụzọ dị mfe. Otu ihe atụ nke njikọta sadulu na ahụ bụ nkwonkwo carpometacarpal nke isi mkpịsị aka. Ka anyị hụ ka nwa ahụ nọ n’ọrụ! Airgbọ elu N'ikpeazụ ụgbọelu na-adabere.
Ọ bụghị ihe na-atọ ụtọ dị ka ndị ọzọ, mana anyị kwesịrị ka anyị hụ ya n'anya. Ọ bụ ihu abụọ nwere ihu abụọ, otu n’elu nke ọzọ. Ndị a nwere ike slide ma ọ bụ bugharia.
Ha na-abịakarị n'ìgwè, dị ka nkwojiaka aka na tarsus nke ụkwụ. Ọkpụkpụ na - ejikọ ọkpụkpụ ndị a ọnụ, mana ha nwere ike ịhapụ ụfọdụ ịtụgharị. Ngwunye ọzọ dị larịị bụ nkwonkwo acromioclavicular.
Nke a bụ njikọta n'etiti eriri olu na usoro acromion nke ubu ubu. Ka anyị na-eweli ubu, akụkụ n’akụkụ a na-eme ka idebe ubu kwụ ọtọ. Ogwu m kwuru na mbido na nkwonkwo cartilage adịghị mkpa nye ndị na-ese ihe, belụsọ na otu nnukwu, okwu dị mkpa: spain gị.
Anyị ga-ekwu maka nke a na nkuzi na-esote. Ihe aga-eme Enwere ọrụ abụọ maka nkuzi a. Ọrụ mbụ bụ ịchọta nkwonkwo ndị a na onwe gị ma mụọ mmegharị ahụ.
Enweela m ụzọ 6 dị nso nke nkwonkwo Skelly na nkọwa dị n'okpuru isiokwu a Ọrụ nke abụọ gị bụ ịbịaru ha dị ka nsụgharị dị mfe. Ọ bụrụ n’ịgbalị itinye ha n’ọnọdụ ị nwere ike isiri gị ike, mana m ga-ekwe ka Marshall nyere gị aka chọpụta etu ị ga-esi mee ya. Zipu ihe osise gi na ndi Facebook na facebook.com/groups/anatomy4artists na Marshall ga enyere gi aka ikwuto ihe oru gi na ndi otu Facebook.
Mgbe emechara, Marshall ga-eme ihe ngosi iji gosi gị otu esi eme ka ị dị mfe na ịkwaga ụdị gị. N’izuụka gara aga anyị mụrụ asụsụ anatomi. Ilebanye anya na ndepụta nke usoro okwu nwere ike isi ike ma sie ike icheta.
Ọ bụ ya mere m ji tinye akwụkwọ ederede PDF nke na-akọwapụta okwu ndị a niile, yana akwụkwọ ntanetị dị ka njirimara kachasị na proko.com/anatomy. N’izu a, m tinyere akwụkwọ PDF ọzọ nke gosipụtara ụdị isii ọ bụla nkwonkwo ọ bụla na ahụ bụ nkewa dịka.
Ọzọ, egosiri ya na anya, karịa naanị ndepụta, yabụ ị nwere ike ibipụta ya maka nrụtụ aka. Ọzọ adịchaghị mma ị ga-ahụ mgbe ị banyere n'ime akaụntụ gị n'izu a bụ ihe nlereanya 3D nke Robo Skelly. Nke a bụ ọkpụkpụ nwere ụdị dị mfe.
Mpempe akwụkwọ ndị dị mfe dị mfe nghọta, cheta, ma dịkwa mfe iji tinye ya na eserese gị, ka ị nwee ike mbugharị ma gbanwee Robo Skelly ozugbo na ihe nchọgharị gị. Nke a ga - enyere gị aka n’izu ụka a na ihe mmụta ga - abịa ka anyị na - amụ banyere ọkpọ a n'uju. Iji nweta ihe njirimara niile, gaa proko.com/anatomy
Gịnị bụ mmegharị nke sadulu?
Mmeghari.Sadulunkwonkwo kwereijena abụọ degrees nke nnwere onwe dị kacondyloidnkwonkwo Ha na-ekwe ka mgbatị / mgbatị, mgbatị / mbido ma yabụ kwe ka ngagharị. N'adịghị ka bọọlụ na nkwonkwo ntọala,sadulunkwonkwo anaghị ekwe ka ntụgharị axial.
N'isiokwu gara aga, ekwuru m banyere otu ị ga - esi bulie ma ọ bụ belata ọrụ na ọtụtụ mgbanwe, ị ga - eche na ọ bụ eserese. N'okwu a, nke a bụ naanị ọrụ mgbanwe abụọ ma ka anyị lee eserese ịchọrọ ịchọta ebe ụgbọ elu tangent dị kpamkpam. Otu ụzọ iji jiri anya nke uche hụ nke a bụ iche n'echiche mbara ala nke na-anọchi anya uru Z na-adịgide adịgide, nke bụ uru nrụpụta mgbe niile maka ọrụ ahụ.
Ma ọ bụrụ na ị ga - ebugharị ya na ala, chọọ isi ebe ọ na - esiteghị na eserese eserese dị n'elu tupu ọ gafee, nke pụtara na ọ nweghị ụkpụrụ ọrụ ahụ gafere ebe ahụ. Yabụ na ị na - achọ ahịrị ụdọ, ebe ị ga - ahụ ụgbọ elu tangent dị larịị. Ma nke a na-enye gị ụfọdụ isi ihe ndị ọzọ dị ka obere mpaghara minima ebe a, bump ebe uru nke ọrụ na oge ahụ dị elu karịa isi ihe ndị agbata obi na-aga na ụzọ ọ bụla, ị na-aga ala n'ihi na 'ihe ọzọ ị ga - abụ ma ọ bụrụ na ị 'na-achọ ebe ụgbọ elu ahụ dị larịị, mana enwerekwa ohere ọhụụ na-atọ ụtọ nke na-apụta n'ihe gbasara ọtụtụ ọrụ.
Nke ahụ bụ echiche nke isi ihe m na-adọta eserese ọzọ ebe a, nwoke a. Ma ọrụ ị na-ele anya ebe a, m ga-ede ya, ọrụ ị na-ele anya bụ f (x, y) = x2-y2, yabụ ugbu a ka anyị chee echiche banyere ụgbọ elu tangent na mmalite nke eserese a dum. Ugbu a ụgbọ elu tangent na eserese a dị larịị na mmalite ya.
Nke a bụ ihe ọ dị ka ya. Na iji kwenye onwe gị, ka anyị gaa n'ihu ma gbakọọ akụkụ ndị ọrụ nke ọrụ a ma nyochaa nke ọ bụla na mmalite. Yabụ ebe a anyị na-elele anya na akụkụ nke X na X-squared bụ naanị ebe X pụtara, yabụ na ọ bụ 2X na nke ọzọ.
Ele mmadụ anya n'ihu n'ihe metụtara Y, anyị na-ewepụta ihe sitere na Y na-adịghị mma ma na-eleghara X anya n'ihi na ọ dị ka ihe na-adịgide adịgide n'ihe gbasara Y, anyị nwetakwara 2Y na-adịghị mma, ugbu a ọ bụrụ na anyị nwere isi mmalite, mmalite, fanye n'ime otu nke ndị a, anyị na-etinye isi (X, Y). = (0,0), kedu ihe ọ bụ mgbe ahụ? Ọfọn nke kachasị elu, X bụ efu, yabụ onye a na-aga efu na yiri ebe a, Y bụ efu, ya mere nke a na-aga efu. Yabụ ihe nkwekọrịta abụọ na-enweghị isi na nke ahụ pụtara na mgbe ị nọ na mmalite ma na-agagharị n'akụkụ ọ bụla enweghị mkpọda na mmegharị gị.
Otu uzo esi hu nke a bu iri elu ihe osise. Yabụ ọ bụrụ na anyị chee na anyị ga-egbutu ya na mbara ala nke na-anọchi anya ya nke na-anọchi anya uru X ma anyị gbutuo eserese ahụ, ihe ị ga-ahụ, nke a bụ ebe m ga-esi tufuo ụgbọ elu ahụ. Ihe ị ga - ahụ bụ na ebe ebe a na - ese ihe eserese a, ka m chọpụta na, ebe ọ na - ese ihe eserese nwere oke nke mpaghara na ebe o si.
Ihe ngbanwe nke uzo ugbua na uzo Y bu ihe di nfe ma obu n'ihi na o yiri ka o bu ihe kachasi elu nke uzo a, ma ugbua ka anyi chee na igbutu ya na uzo ozo, yabụ oburu na anyi nwere nke zuru oke oburu na inwere graphs na adịghị egbutu ya na uru X na-agbanwe agbanwe, kama gbue ya na uru Y na-agbanwe agbanwe, mgbe ahụ na nke a, anyị na-elele akụkụ ahụ na mgbe anyị chọpụtara akụkụ ahụ, ebe uru Y a na-agbanwe mgbe niile na-ese foto. Ka anyị hụ otú ọ ga-adị. Ọ bụkwa ụdị nke parabolic udi.
N'ebe a, tangent ahụ dị larịị n'ihi na ọ dị ka ụzọ dị ntakịrị nke usoro a. Yabụ, ebe ọ bụ na ọ dị larịị n'otu akụkụ ma dị larịị na nke ọzọ, ụgbọ elu tangent nke eserese n'ozuzu ya ga-adị larịị. Ma rịba ama na nke a abụghị nke kachasị mpaghara ma ọ bụ nke kachasị na mpaghara n'ihi na site n'otu ntụziaka, site n'otu ntụziaka, ọ dị ka ọ bụ oke mpaghara, ebe a ka m na-ekpochapụ nwoke ahụ, ọ dị ka ọ bụ mpaghara kachasị ma ọ bụrụ na ị lee anya n'ebe ahu, mana site na uzo di iche ma oburu na igbutu ya di iche iche o di ka mpaghara kacha nta.
Ma ọ bụrụ na anyị lelee akụkụ ahụ, ụdị ọ bụ ihe ezi uche dị na ya n'ihi na ọ bụrụ na ị na-ele ya anya Na-echegharị mmegharị na ntụzi X, ọrụ niile dị ka X-square tinyere ụdị mgbe niile. Yabụ na eserese nke a ga-adị ka ihe ngosi X-square parabolic nwere nke pere mpe na mpaghara, mana ọ bụrụ na ị na-elegharị mmegharị anya na ntụzi Y-na ị na-elekwasị anya na mpaghara Y-square a. Eserese ị nwetara maka Y-adịghị mma dị ka parabola na-adịghị mma.
Lee, m see ya ọzọ. Ọ ga-adị ka parabola ihu ala yana nke ahụ nwere oke mpaghara. Yabụ dị ka ụzọ X na Y na-ekwenyeghi na isi okwu a, ma ebe a ebe ị nwere ụgbọ elu dị larịị, kwesịrị ịbụ nke kachasị mpaghara ma ọ bụ opekata mpe mpaghara.
Nke a dịkwa ọhụrụ na ọtụtụ mgbanwe. Na ngụkọta oge na otu agbanwe, nke a anaghị eme n'ihi na mgbe ị na-ele ihe osise nke ọrụ, ị ga-ahụ ụdị eserese. Mgbe tangent bụ efu, ị mara mgbe tangent bụ na ụfọdụ ebe kpamkpam ewepụghị, ma ọ bụ a mpaghara kacha ma ọ bụ na ọ bụ a mpaghara kacha nta.
O nweghi ike ikwenye n'ihi na enwere otu agbanwe agbanwe. Enwere naanị X dị ka mgbanwe ntinye maka eserese gị. Mana ozugbo anyị nwere abụọ, ọ ga-ekwe omume na ebe a na-amaghị nke ọma nwere aha pụrụ iche na aha ahụ dị ka, dịka eserese a ị na-ele anya, a na-akpọ ya isi ọdụ.
Isi sadulu. Ma nke a bụ otu oge dị obere mgbe m masịrị ndị ọkà mmụta mgbakọ na mwepụ nyere ihe, ụdị ihe dịka ịnyịnya, ihe dịka ị ga-etinye ya n'azụ ịnyịnya tupu ịnya ya. Otu ihe nke anyị pụtara pụtara na anyị ga-anwa ịchọta ụzọ iji chọta oke kachasị ma ọ bụ opekempe nke ọrụ, dịka anyị 'mgbe anyị na-anwa ịkwalite ọrụ nke ga-eme ka akara azụmaahịa gị ma ọ bụ ọrụ ego bara ụba. ebe a na-amụ igwe ma ọ bụ ihe dị ka nke ahụ, ọ dị anyị mkpa inwe ike ịkọ ma otu isi ihe bụ isi jịrịjị na eserese ahụ dị mma.
Y can nwere ike ịhụ ya anya, mana oge ụfọdụ ọ bụrụ na ị nweta usoro ọrụ nke ọ bụ ogologo oge. Na-enweghị ele eserese ahụ, kedu ka ị ga - esi mara ma ị na - eme ụfọdụ nyocha na usoro ahụ, ma ọ bụ na ọ bụghị? ọ bụ ebe sadulu? nke ahụ dabere na ihe a na-akpọ nnwale nnwale nke abụọ nke m ga-ekwu maka ya na isiokwu ole na ole sochirinụ. Hụzie gị!
Kedu akụkụ nke oche ịnyịnya ígwè?
Ahụkarịsadulumejupụtara nke njirimara ole na oleakụrụngwa.
N'ihu na n'ihu.
N’agbanyeghi omume n’afọ ndị a, ndị mmadụ na-etinye ego buru ibu iji nweta ịnyịnya ígwè, ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye akpa gị n’elu ebe kwesịrị ekwesị. Ndị a bụ usoro ole na ole dị mfe ga-enyere gị aka ịchọta ọnọdụ sadulu gị n'ebe kwesịrị ekwesị. Ugbu a, na njedebe nke isiokwu ahụ, m ga-atụle ya na nke m ugbu a sadulu elu na ọnọdụ, na mgbe ahụ anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na ndị a ụzọ ka m n'ezie nso ebe m na-aga.
Anyị na-amalite site n'ịgbanwezi ihe dị elu nke sadulu. Greatzọ kachasị mma iji mee nke a bụ itinye igwe kwụ otu ebe na onye na-azụ gị n'ime ụlọ, mana ị nwekwara ike ime ya n'okporo ámá. Kpachara anya.
Ya mere, wụkwasị na igwe kwụ otu ebe gị. Wantchọrọ itinye ikiri ụkwụ nke ụkwụ gị na pedal, ma n'oge a, a ga-ekpochi ụkwụ gị. Ma anyị ga-anwa ịgba mbọ ugbu a iji jide n'aka na pelvis anaghị ada ụda azụ.
O siri ezigbo ike. Ya mere ị nwere ike ịhụ na ụkwụ m anaghị ekpochi kpamkpam na ala nke ọkpọ, yabụ enwere m ike ibuli oche m ntakịrị elu. Echere m na nke ahụ bụ ọkọlọtọ.
N'aka nri, ya na ogo gị nwere ike ịdị larịị, anyị ga-eleba anya ugbu a n'ihu ma ọ bụ n'azụ oche gị. Ọfọn, a na-emekarị mgbanwe ebe a site na ịtọghe otu ma ọ bụ abụọ kposara na oche oche, dabere na mbipute ahụ. Na tupu anyị amalite n'ezie, m ga-emesi ya ike na igwe kwụ otu ebe ga-abụrịrị ọkwa zuru oke, yabụ anyị nọworị ebe ahụ nwee mmụọ iji jide n'aka na ọrụ a.
Mgbe ahụ enwere ikpe iji akara mkpịsị aka. Hm. Feetkwụ nwere ọnọdụ ịnya nkịtị ugbu a, ịchọrọ idobe ihe mkpuchi gị na mgbe ahụ ịkwesịrị iwetu pumb gị n'akụkụ akụkụ ahụ na azụ nke ikpere ikpere gị.
Nke ahụ kwesịrị ibelata ntụpọ ụkwụ gị na ọkara. Ya mere, a na-akpọ nke a Usoro Kops, ọ nwere ndị na-akatọ ya. Anyị ga - abụ onye izizi ikwere na ọ nwere oke ya, yabụ ị ga - edozi ya nke ọma dabere na ụdị onye na - agba gị nọ n'ọnọdụ agbatị, mgbe ahụ ị ga - ahụ onwe gị ka ị na - ebugharị sadulu ahụ ihu obere.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-agbagharị n'ọnọdụ dị jụụ na njikwa aka na obere mkpịsị aka, ị nwere ike ịlaghachi azụ. Ọzọ, ọ dị ezigbo mkpa iji hụ na sadulu gị kwụ ọtọ. Ọ bụrụ na e hulatatụ ya ntakịrị, ọ nwere ike itinye obere nrụgide n ’ebe ụfọdụ dị nro.
Ma oburu na aturu ya aka na ala, aga enwe otutu ibu n’elu aka gi ma inagide ya na n’elu. N'ihi ya, anyị chere na ọ kacha mma. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ na UCI na-agwa gị na ị ga-enwerịrị nkwekọ ọ bụla, yana ịlele ihe niile ị ga - eme bụ ime ka mmụọ gị tụkwasịrị obi pụta, gbaa mbọ hụ na igwe kwụ otu ebe gị dị larịị, wee mezie ya otu ahụ anyị kwesịrị iji dozie ya dabere ịdata ya ntakịrị site na imi gị.
Mgbe i mechara ihe atọ ndị a, ịkwesịrị ịwụghachi na igwe kwụ otu ebe gị ma gafere ihe niile ọzọ, n'ihi na o doro anya na mgbe ị gbanwere ogo gị dị ka gị. Ozugbo ị mechara ihu ma gbanwee njem, ọ ga-enwe mmetụta na ebe etinyere oche ahụ. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, mee ka mmadụ see gị ihe mgbe ị na-agba onye ọzụzụ turbo ahụ.
Nke a bụ ụzọ dị mma iji mata ihe ị dị ka ị na-anya ụgbọ ala. Chọrọ itinye anya pụrụ iche na pelvis gị. Chọghị ịma jijiji na, n'ihi na ọ pụrụ n'ezie iru ala.
Ugbu a, anyị ga-ekwu na iji wee nwee ike ịnwe igwe kwụ otu ebe gị, ị ga-atụle ọtụtụ ihe ndị ọzọ, dịka mgbanwe gị dịka ọmụmaatụ ma ọ bụ, ikekwe nke ka mkpa bụ, ma gị na mkpịsị ụkwụ gị gbadaa ma ọ bụ n'ikiri ụkwụ gị nzọụkwụ. Nke a nwere mmetụta dị ịrịba ama na ịdị elu nke sadulu gị, dịka ọmụmaatụ. Yabụ, ozugbo ịmechara ya, ị nwere ike mezie ya ka ọ dị mma ma dịkwa ike.
Dị ike! Dị ka anyị kwuru na mbido, enwere mkparịta ụka gbasara otu ị ga-esi chọta ezigbo ọnụ ọgụgụ sadulu maka onwe gị. Mana lee ụzọ ole na ole ndị ọzọ ị nwere ike ịchọ ịnwale ma ị ga - eme ya ọfụma. First nwere ebe a ga-akpọ goniometer na nke mbụ? Mba, mba, echeghị m otu ahụ.
Anyị onwe anyị. Mana inwere ike iburu ha maka ego n’adighi oke. Ma ị nweta otu, ịnwere ike iji usoro Holmes.
Ugbu a ị nwere ike nnoo gbanwee akụkụ shin gị na mmekọrita nke gị. tụọ apata ụkwụ. Holmes achọpụtala site na nyocha ole na ole kachasị mma maka bit a ebe a bụ ogo 25-30 mgbe ị nọ na ala njem ụkwụ gị.
oke ike gwụrụ oge niile
Methodzọ ọzọ bụ tụọ ime n’ime ụkwụ gị. Aga m arịọ mgbaghara n'oge a. Anyị gbalịrị ịchọta ụzọ iji mee nke a na-enweghị ya ka ọ dị ịtụnanya, mana anyị enweghị ike.
Yabụ ụzọ kachasị mma bụ ịnweta ogo mmụọ ogologo, tinye ya n'agbata ụkwụ gị, kpoo ya iji gosipụta mmetụta nke sadulu, wee tụọ ebe dị anya site na njedebe nke ogo mmụọ gị
Anaghị m egwu egwu .. .na ala.
Ugbu a ana m ebu ụzọ wepụ akpụkpọ ụkwụ m n'ihi na achọghị m ka ha gbanwee uru nke ije m, mana achọrọ m ịchọta onye ga-esonye m ịtụle nke a. Onwere onye choro itule? - Mba - Achọrọ m ịchọta mgbidi ma ọ bụ ihe ọzọ? Detuo nke ahụ.
Nri. Ya mere, ogologo ngagharị m bụ nke ọma, 875 millimeters.
Wee were ya were sentimita anọ site na ya, nke ahụ ga - enye gị ọnụ ọgụgụ gị dị elu, nkea si n'etiti etiti axle dị n'elu ya, jiri akara oche gị. Ihe mgbagwoju anya. Ya mere, anyị nwere ụzọ atọ iji gbakọọ ịdị elu gị na otu maka ịgbakọ etu ọ ga-esi dị n'ihu ma ọ bụ azụ ọ kwesịrị ịdị.
Mana anyị kwuru na mbido isiokwu a na m ga-anwale ya iji hụ etu o siri metụta ọnọdụ m nke m mezigharịrị kemgbe ọtụtụ afọ. Yabụ ihe mbụ. A na-ahazi nke a ugbu a maka usoro ikiri ụkwụ na m tụọ ya site na etiti nkwado mgbodo ahụ gaa n'elu akwa ahụ wee pụta na ọ ga-abụ 760 millimeters nke bụ 775 millimeters.
Mana ihe na-atọ ụtọ, usoro ikpeazụ m ji tụọ nzọ ụkwụ m nyere ọnụ ọgụgụ ahụ ziri ezi, 775 millimeters. N'ezie ọ dịghị ihe ọ bụla metụtara ọha mmadụ, ma ọ nwere ike bụrụ na usoro ịkwanye ụzọ ka mma maka m. Agbanyeghị, ekwesịrị m ịsị na ọ dịghị onye n'ime ha na-echebara ogologo nke cranks m.
Yabụ na nke a, m na-agba 172.5s, mana m na-agbakarị 175s. Ma gịnị na-eme mgbe m nọ na 167.5s? Ọ bụ nnọọ nnukwu ọdịiche n'ebe ahụ.
Ọzọkwa, ọ naghị elebara mkpokọta mkpụkọ, akpụkpọ ụkwụ m na pedal anya, nke nwere ike ịba uru dị ukwuu ebe ahụ. Ya mere ihe omumu site na ihe ndia nile bu na usoro ndia nile g’enweta gi ala ubi baseball, mana ikwesiri idozi ya onwe gi ka ichota nke kachasi nma ma di ike. Mee mgbanwe niile n'ọnọdụ gị wee jiri nwayọ nwayọ, dị ka n'eziokwu ị nwere ike imerụ onwe gị ahụ karịa ma ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ ziri ezi karịa ma ọ bụrụ na ị debere ọnọdụ gị ochie.
Ọ dị mma mgbe ọ bụla ịdekọtara ebe ị bidoro ka ị nwee ike ịlaghachi ebe mbụ. Ya mere tụọ site n’etiti ihe nkwado ala ahụ n’elu elu sadulu ahụ na site n’imi imi ya ruo na njikwa ahụ. Na na mara mma nke ukwuu na-agwa gị gị ike kwa afọ.
biking calories ere ọkụ
Iji lee akụkụ ọzọ nke igwe kwụ otu ebe gị dabara, ya bụ etu ịdị elu na etu aka gị kwesịrị ịdị, gịnị ma ị pịa ebe ahụ wee lelee ederede pụrụ iche gbasara ya? Mgbe ahụ, iji mee ka ụzọ gị kwekọọ na akpụkpọ ụkwụ gị, anyị nwere isiokwu na ha. Naanị pịa ebe ahụ ma ị nwere ike ịga ogologo ma lelee ya. N'ikpeazụ, ka ịghara ịhapụ akụkọ GCN ọzọ, nke ị na-achọghị ịme, gịnị kpatara ịdenye aha site na ịpị m?
Kedu ihe sadulu na-eme?
.B.sadulu bụoche nke onye na-agba anụmanụ, ọ na-abụkarị ịnyịnya. A mere nke ọmasaduluna-enye onye na-agba ịnyịnya ihe nkwado dị mkpa, nchekwa na ịchịkwa anụmanụ ahụ. Nasaduluna-eme ka onye na-agba ịnyịnya nwee ike ikwekọ na ịnyịnya ya site n’ikwe ka ọ nọdụ n’elu isi nke ịnyịnya ahụ.
G AN A B A AB BER BE MMA Ọ B THAT. NA AH SORA NA ANB ANR BE NA-EMEBU SB SR G GB GR G! ♪ MARYSVILLE, CALIFORNIA N’AGBU N’IME ỌGW G GOLDRUSH. TAA I KWES AR A DLỌ NKE Dị Iche Iche
AKWADKWỌ AKWADKWỌ PADRINI. N'ebe dịpụrụ adịpụ bụ PEDRO PEDRINI KWES CRBO KWESYR WHO KWES WHOR WHO B WHO ND L WESTERN LIFE. MA E NWERE
Ọ B FR France! Kedụ ka aha aha French si eme mba ọdịda anyanwụ na United States? PEDRO: A B WAS M BANYERE MGBE MGBE MGBE MGBE M GATERE NA MB H MBOR, NA AH THAT NA-AH L NA-AHOV N'THLỌ N'ERELỌ. M pụtara na ọ bụ! JILL, V / O: PEDRO BERE AMERIKA N’afọ iri anọ gara aga. N’AFỌ 20, Ọ DADR S NWA MADIR YA, NA KARANA P OFTA 1,000 n’ime ha! NKWA A NA-ERI NDOUR HERE 300. AKW ?KWỌ 300? EE, KWESXRO KWES .R..
Ọ BU EKU N'OKACHUKWU. ỌT SR S ASỌSING N'ỌNWING, NKE A B V MALLK SMK,, NA-AKP SP AKW SPKWỌ AK .KỌ. JILL, V / O: BASIC, WESTERN SADDLE nwere ọtụtụ akụkụ.
Kachasị mkpa dị mkpa, oche, mbata, ndị
AHU NA NKWUKWU. PEDRO NA-AKW THATKWỌ NA LE P CANR EV ERYM EVTA IHE Ọ B THER THE NA ỌR AND ANDMOR. PEDRO: Isi IDEA B TO EZI ORLỌ AH AND NA GID R NA Ihe ị ga-eji obere ihe a mee.
ỌR IS B IS NỌBU NWA. Ọ B IFRAD na nwa mụọ anaghị arụ ọrụ
Ọ D L KA INWE ARLỌ ỌMCMA NA-ENWEGHOU ENGIEL. JILL, V / O: MGBE PEDRO DỌWERE ATA, O RITERE AKA AKW WKWỌ AKW WKWỌ AKW WKWỌ AKW WKWỌ AH TOR TO TOLỌ. Osisi di ka uzo nke nkpuru.
PEDRO NA-amalite site na KUHWIDE SITE A St. LOUIS, MISSOURI. Ọ na-emepụta ihe ọhụrụ dị iche iche nke kaadịadị naanị maka nke a ma bido ịbelata ihe ndị ọ chọrọ.
Nke a bụ akụkụ nke na-echebe iwu gị site na ọsụsọ nke ịnyịnya. NA ala ya bụ steepụ. EE
ABASI NWAANYI DI Egwu
ABULI NWAANYI DI EWU !!! UGBU A Oge eruola itinye ihe akpo uzo di na osisi .PEDRO: Jill, anyi choro ka anyi kporo ihe ndi ozo ma mee ka ozo di otua! Ọ DỊ MMA! NTI, ACEBACER AR YOUB YOUR YOU YOU P CANR B ITB ITR WE NA Anyị NA-AGA. AH V D GO MMA! ♪ WHO! NKWUKWU A NA-EGO! Anyi na-anwa ime ka ezughi oke nke osisi a.
JILL, V / O: PEDRO NA-EWETA N’AKA NA-AD HGHOUR AKW TOKWỌ NJỌ KWESOR M KWES 50R 50 KWES 50R 50 PLỌ AKA. Ọ BOND B EV IHE Ọ B ORLA NKE NA-EGO NA Ọ BN Ọ B HAS Ọ B TOR TO TOBRAR OR MA Ọ B TH ỌB THRIN NKE AKWATKWỌ AH LE, Dabere na ọkpụrụkpụ a chọrọ. SEH THISR THIS NKE A B A ELU KWES-R THIS- NKE A B A ELU KWES SPR H KWES ,R,, N'AGBANY WE, ANY WE NA-AKA TOD MI ỌR ALL NILE.
Jill, V / O: PEDRO NA-EAGHACHI usoro ruo mgbe osisi ahụ kpuchie na akọrọ, mgbe ahụ, ọ na-amalite ịmepụta ihe dị iche iche dị iche iche na-eji dị ka onye na-ebu ụzọ na-egbu egbu NA Nke ahụ bụ ezigbo kuru nku she LEATHER, na hapụ a mbe anyị nwere ike bee abụọ a. Ọ D, MMA, KP PRR F Mkpịsị aka a na nke a na-enye gị
Ntuziaka KINDA NA YOU NA-EBEP ALLTA NKE NDSE A N'CLỌ. JILL, V / O: MGBE Ọ KUR THEP DR D ỌR IN N’AKA AH HE, Ọ NA-AMALTS N’ỌB HRAM NA PEBARA ỌR TO C KRER RR R ỌR AND NA INYERE N’AKA. KWURU MA Ọ B L EBERE IHE DOL ICHE ICHE chọrọ ngwaọrụ dị iche.
Ngwaọrụ na-aga nke ọma na ọ bụla obere chaams
Ọ B IFR YOU na H KPỌR DE EBER AND NA Mechie ÌHIGHT ÌHIGHT, HAVE GA-EGWURU THELỌ. NA
YOÙ NA-AH WHAT Ihe M Nwetara? Ọ na-eme ka onyinyo. JILL, V / O: MGBE KWES THER THE KWES SER ALL KWES ALLR ALL KWES ALLR OTHER ND OTHER ỌZỌ NA-EKWUP ONR. .PEDRO: A GA-EGO AKA NA AHIR.
Nke a bụ igwe na-akwa ákwà nke ga-eme ya, HA HA! JILL: Ọ NA-EKPUE IHE NILE NA-AKPỌ AKW WITHKWỌ BEESWAX. N'IHI NA RB IS AKW STKWỌ, Ọ gaghị ahapụ wear .PEDRO: E nwere ngwaọrụ abụọ dị iche iche a na-akpọ ASITITCH MARKERS, Nke a bụ 6 Stage PER INCH KA YOU B RROL THELỌ NA-AK ANDKỌ Ọ B AND Ọ B AND ỌBOT.
NA MGBE YOU P CANRUT ADEBADER YOUR AH,, NKWARKWU EBỌR, Gị, KWES ONR ON N'ONLỌ AKA NA
Ọ ga-akụkwapu oghere gị ka i wee nweta nke a. JILL, V / O: ICELỌ NKE Ọ KWES HRAS KWES HISR HIS KWES ISR IS KWES ISR IS $ 4,500 MGBE A NA-EKWU SLỌ AKA, PEDRO SCRUBS NA-ECHICHE Mmanụ. Usoro ahụ na-eri nri ya ma na-eme ka akpụkpọ ahụ pụta na-acha ọkụ.
MGBE AH IT, Ọ NA-EJI MMIRI KWURU EGO KA Ọ B SH SHANY! UGBU A, KA M NA-EME PEDRO ROBỌCH, AH I, M KWES ABR BY N'COMLỌ N'BYLỌ N'COMLỌ KWES TOR TO KWES EXR AND KWES ANDR AND KWES ANDR AND KWES ANDR AND KWES TOR TO TOLỌ.
Gini mere o ji di nkpa banyere oche ya?
Sadulu nkwonkwonye nkwụsi ike na ọkpụkpụ mgbe ị na-enye mgbanwe karịa mgbatị ma ọ bụ mpịgharịnkwonkwo. Ọkpụkpụ na-anọdụ nasadulunwere ike ịmegharị na ọdịdị oval metụtara ọkpụkpụ nke ọzọ, nke yiri nke ankwonkwo condyloid.Jenụwarị 13. 2015 g.
Isi mkpịsị aka bụ naanị ihe jikọrọ oche ya?
nke giisi mkpịsị akabụnaanịakụkụ ahụ gị nweresadulu nkwonkwo. Ọkpụkpụ n'ime ihe ị na-edokwasị gịnkwonkwobụ ọrụ maka ịkwagharị na-aga n'ihu, akụkụ gaa n'akụkụ. Ndị ankwonkwoenwere onwe gị iji mee mmegharị ọ bụla n’ime ahụ gị.
Isi mkpịsị aka ukwu bụ naanị ihe jikọrọ aka ya dị n’elu ahụ mmadụ?
nke giisi mkpịsị akabụnaanịakụkụ nke gịahụnke ahụ nweresadulu nkwonkwo. Ọkpụkpụ n'ime ihe ị na-edokwasị gịnkwonkwobụ ọrụ maka ịkwagharị na-aga n'ihu, akụkụ gaa n'akụkụ. Ndị ankwonkwoenwere onwe gị iji mee ngagharị ọ bụla na gịahụ.
Gịnị ka okpuru ihe ịnọ n’elu a na-akpọ?
AHIR. Uwe nkesadulubụ nnukwu akpụkpọ anụ ma ọ bụ ihe ọzọ - dabere nasadulu- na-anọdụn'okpuruoche nkesadulu. Ọ bụ ụdị ihe mgbochi nke na-enwekarị akpụkpọ anụ ma ọ bụ ihe ọzọ na-adọrọ adọrọ nke na-echebe ịnyịnya ma na-enyere aka idobe ihe ịnyịnya ahụ.
Kedu oche oche ịnyịnya igwe kachasị mma?
Kasị MmaN'ozuzu: Bikeroo OversizedOche oche nkasi obi. N'ime 6,400igwe kwụ otu ebendị na-agba ịnyịnya hụrụ Bikeroo a n'anyaoche igwe kwụ otu eben'ihi ọtụtụ ihe. Tinyere ihe ergonomic design, ndi ama amasaduluatụmatụ zuru ezu padding na oversized udi maka kwukwarankasi obina mgbakwunye nkwado.Mar 19 2021
Kedu ihe omume kachasị na ụwa ịgba ọsọ?
Cape TownOkirikiriTour bụkasị ukwuuogeihe omume igwe kwụ otu eben'imeụwa. Na-adọta ihe karịrị 35,000ndị na-agba ịnyịnya ígwèsi gburugburu ụwa kwa afọ, nke a iconicihe omumebụ n'ezie ahụmahụ pụrụ iche maka ndị sonyere na ndị nkiri.
Kedu ka ọkpụkpụ si dị na nkwonkwo sadulu?
Njikọ ihe jikọrọ ọnụ bụ synovial nkwonkwo ebe otu ọkpụkpụ na-akpụkọ nkwonkwo a dị ka ihe ịnyịnya nke ọkpụkpụ ọzọ na-adabere na ya dị ka onye na-agba ịnyịnya. Ngwunye sadulu na-enye nkwụsi ike n'ọkpụkpụ ma na-enyekwu mgbanwe karịa mgbatị ma ọ bụ nkwanye. Ọkpụkpụ nke nọ ọdụ n'elu ịnyịnya nwere ike ịkwaga n'ụdị oval
Gini mere eji akpo nku azu bu sellar joint?
Ọ bụ otu n'ime ụdị nkwonkwo synovial ise dị n'usoro ọkpụkpụ mmadụ. A makwaara ya dị ka nkwonkwo sellar dị ka ọkpụkpụ na-ezukọ na nkwonkwo ụdị X. Ebe ọ bụ na nkwonkwo nke nwere obi ịnyịnya nwere ihu arụ ọrụ nke jikọtara n'otu ụzọ na convex na nke ọzọ, yabụ na-enye ohere mmegharị n'akụkụ niile belụsọ maka ntụgharị axial.
Kedu akụkụ nke isi mkpịsị aka ukwu na-eme ihe eji ebu ibu?
N'ihe atụ a, trapezium na-etolite oche okike nke mbụ metacarpal nọ. Nkwonkwo carpometacarpal nke mkpịsị aka aka na-eme ka mkpịsị aka mmadụ na-emegide ya site na ikwe ka ọ gafere nkwụ iji kpọtụrụ mkpịsị aka anọ ndị ọzọ nke aka.